4 Sarkaal oo ka tirsan Ciidamada Xooga Dalka oo lagu Xanibey Xarunta Xisbiga ee magaalada Muqdisho ka dib markii ....
Sida wararku ay shegayaan Taliska Ciidanka Xooga Dalka Somaliya ayaa xabsi guri geliyay 4 Sarkaal oo laga xusey Gaashaanle Sare Liibaan Madaxweyne, oo ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Qalabka Sida ee ka hawlgasha Gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu eedeeyey in ay hurinayeen dagaalo.
Ninka ugu sareeya Milatariga Soomaaliya ee ah Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka General Daahir Aadan Cilmi (Indha-qarshe), ayaa waxa uu Saraakiisha ku amray in aynaan ka bixi karin Xarunta Xisbiga, oo ku dhow Garoonka kubadda cagta ee Stadium Mudisho, iyadoona lagu wargeliyay in xabsi guri yihiin.
Liibaan Madaxweyne iyo 3-da nin ee kale ee lala soo xiray, ayaa tan iyo Isniintii ku sugan Xarunta Xisbiga, waxaana dhaq dhaqaaqoodu la socdo ciidan si gaar ah ilaalo looga dhigay.
Ilo muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo, ayaa sheegay in 4-taan nin loo arkay in ay sii hurinayaan dagaal beeleedyada soo noq noqday ee ka aloosan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wasiirka Wasaarada Gaashaandhiga ee Somaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, oo ay Dowladdu u xil saartay dagaalada Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa Liibaan Madaxweyne u arkay mid caqabad ku noqon kara, waan-waanta laga dhex wado labada beelood ee weli isku haaya Gobolkaasi.
Tallaabada lagu soo xiray Liibaan Madaxweyne iyo xubnaha kale wehlinaaya, ayaa waxaa soo baxeysa in uu ka dambeeyay Wasiir Xaamuud, isla-markaana uu u kaashaday Taliyaha Ciidanka Xooga.
Saraakiisha iyo Ciidamada Dowladda ee ka hawlgala Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa qaarkood lagu eedeeyay in ay la kala safteen beelaha ay dhiilada colaadeed u dhaxeyso.